Xhumana - WoopShop ®
Sicela ufunde FAQ yethu phambi ukusithumela umlayezo.
Yiziphi izinkokhelo zokulethwa kwe-oda kusuka ku-Online Shop?
Wonke ama-oda akhululwa mahhala amacala futhi mahhala intela
Yiziphi izindlela zokukhokha ezamukelwa ku-Shop Online?
Izindlela zokukhokha ezihlukene zamukelwa ukuze kube lula ukuhlangenwe nakho kwamakhasimende ethu. Ungakhokha ngamakhadi we-Paypal, amakhadi okukhishwa, amakhadi esikweletu, i-Bancontact, i-SOFORT, i-Giropay, iDeal, i-P24, i-Apple Pay, i-Google Pay, i-Chrome Payment, i-Mastercard, i-Visa, i-American Express, i-cryptocurrency noma nge-WoopShop cashback yakho kanye ne-wallet
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthunyelwa?
Ukuthunyelwa kwe-Usualy kuthatha izinsuku ze-7-20 futhi kungavamile kwezinsuku ze-30 +
Kuphephile kanjani ukuthengwa ku-Shop Online? Ingabe idatha yami ivikelwe?
Isiteji sethu sisebenzisa ubuchwepheshe obuphephile kakhulu ukuqinisekisa ukuthi idatha yethu yekhasimende ivikelwe
Kwenzekani ngempela emva kokuyala?
Uzothola i-imeyili ngemininingwane yakho ye-oda futhi uma ithunyelwa uzothola enye i-imeyili kuhlanganise nenombolo yokulandelela neminye imininingwane
Ingabe ngithola i-invoyisi ye-oda lami?
Isikhungo Sezinkonzo Zamakhasimende
Uma udinga noma yiluphi ulwazi mayelana nokuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswa noma okwenziwa ngemuva kokuthengiswa okufana nemiyalo yakho yakamuva, inqubo yokuthenga, izindlela zokukhokha, izinketho zokulethwa noma inqubo yokuphikisana, sicela uxhumane ne-Woopshop.com ngengxoxo ebukhoma noma nge-E-mail [Email protected] futhi Inkonzo yethu Yamakhasimende izophendula ngokuvamile ngaphakathi kwamahora we-24.
Ukuthumela okuningana nokulahla:
IWoopShop.com iyi-global wholesale and supporter iwebhusayithi. Yonke imikhiqizo eseWoopShop yikhwalithi ephezulu futhi ingathengiswa ngentengo ethe xaxa. Ukuthenga imikhiqizo yefashini ethengisa online emakethe ethengiswayo yaseShayina akukaze kube lula kangako. Ukusiza abathengisi be-inthanethi nabaphakeli abathengisa ngokwengeziwe ukuthi bandise ukuthengisa nokukhulisa amabhizinisi abo, sixhuma amakhasimende ethu nabakhiqizi abaphezulu. Kulula futhi futhi ukuthi kungabi bungozi kuwe ukuqala ibhizinisi lakho ngosizo lweWoopShop wholesale futhi uyeke ukuthunyelwa kwensiza. Izindawo zethu zokugcina izinto eYurophu, e-US naseCanda, e-Australia nase China zinakho.
Ngokuthola okuthe xaxa nokuyekisa umsebenzi wokuthumela, sicela uxhumane [Email protected]
Ukuxhumana kwebhizinisi, ungaxhumana nathi nge-imeyili.
Ikheli: 1910 Thomes Avenue, Cheyenne, WY 82001, eU.SA
I-WoopShop yinkampani yezitolo ethengisa online. Ngokubheka imigqa nezitayela zakamuva zomkhiqizo, siletha ukuthambekela kwakamuva kokuqonda kuqondise kumakhasimende ethu ngamanani angenakuphikwa.
Sithumela emazweni angaphezu kwama-200 emhlabeni jikelele. Ukusatshalaliswa Komhlaba Nokunwenwela kusenza sikwazi ukuletha ukulethwa okusheshayo. Selokhu yasungulwa, iWoopShop ibone ukushesha kwesilinganiso sokukhula kwezinkomba eziningi zebhizinisi, kufaka phakathi inani lokuthengisa eliphakeme lonyaka, inani lemiyalo, abathengi ababhalisile nabathengisi, kanye nohlu.
I-WoopShop inikezela ngemikhiqizo ehlukahlukene: okokugqoka kwabesilisa nabesifazane, izicathulo, izikhwama, izesekeli, okokugqoka, okokugqoka okhethekile ngezikhathi ezithile, ubuhle, ukuhlobisa ikhaya njalonjalo.
Iwebhusayithi yethu esemthethweni i-WoopShop.com itholakala ngazo zonke izilimi, njengeFrançais Español Deutsch, i-Italian, i-Arabhu njll. I-WoopShop inikeza abathengi indlela elula yokuthenga imikhiqizo eminingi yokuphila ngamanani akhangayo.
Ngohlelo oluhle lokulethwa komhlaba wonke, singakwazi ukuqoqa imikhiqizo ephakeme futhi sinikeze insiza engcono yokuthenga online esheshayo kumakhasimende ethu.
Thola ulimi Afrikaans Albanian Arabic -Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano ngesiChewa IsiShayina (Esenziwe Lula) IsiShayina (Esivamile) Croatian Czech Danish Dutch isiZulu Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Creole Haitian Hausa Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese isi-Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Lao Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi -Mongolian Abantu abaningi isiMyanmar (isiBurma) Nepali Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian waseSomali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu
Afrikaans Albanian Arabic -Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano ngesiChewa IsiShayina (Esenziwe Lula) IsiShayina (Esivamile) Croatian Czech Danish Dutch isiZulu Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Creole Haitian Hausa Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese isi-Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Lao Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi -Mongolian Abantu abaningi isiMyanmar (isiBurma) Nepali Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian waseSomali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu
Umsebenzi wetheksthi kuya kokukhuluma unqunyelwe izinhlamvu ze-200
Izinketho : Umlando : Impendulo : Nikela Close